आज बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? « गोर्खाली खबर डटकम
माघ १३ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
२०७७ चैत्र १ गते आइतवार प्रकाशित
काठमाडौँ – आइतबार सुनको मुल्य बढेको छ भने चाँदीको मुल्य स्थिर रहेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मुल्य तोलामा ४ सयले बढेर ८६ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि शुक्रबार छापावाला सुन तोलाको ८६ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो ।त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ८६ हजार १५० रहेको छ ।त्यसैगरी आज चाँदी भने आज स्थिर रहदै प्रतितोला १ हजार २७० मै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
घरमा घ्युकुमारी रोप्नु भएको छ भने यस्ता रोगलाइ गर्नुहोस बाइ बाइ।यस्ता छन् नसोचेको लाभ
पायल्स रोगका बिरामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन्। दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रोगको जोखिम झन बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्। कब्जियत नै पायल्सको मुल कारण हो ।जब कब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका रक्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ । यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ ।
पायल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ। पायल्स रोग निको पार्ने केही घरेलु विधि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यी विधि अपनाउँदा पायल्स हुन नदिन र पायल्स भएकाहरुलाई निको पार्न उपयोगी सिद्ध हुनेछ।पायल्स भएका विरामीहरुका लागि घ्यूकुमारी अचुक औषधी हो । पायल्स भएमा विस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ। बदामको तेल अर्थात् बदाम रोगन पनि लगाउन सकिन्छ।
एक दिनमा ३–४ पटक मलद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ। काँचो केरा उसिनेर बिहान–बेलुका खाँदा पनि पायल्स रोगीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पायल्सका रोगीले तारेको/भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन। कब्जियत हुन नदिन रेसा युक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ। अलिभ (जैतुन)को तेल लगाउँदा पायल्सका विरामीहरुका लागि आराम मिल्छ मूलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पायल्सका रोगीलाई फाइदा हुन्छ । आँपको कोयाको गुदीको चूर्ण महसँग मिसाएर खान सकिन्छ। दिसा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास लक्षण हो।
मलाशयमा भारीपन हुने, दिसा राम्रोसँग नहुने, दुख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन् । जति जति रोग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दुखाई बढी हुन्छ । गुद्वारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ कब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ । किनभने अपच हुने खाने कुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्याकेटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जंक फूड, मसलेदार, मासुजन्य खानेकुरा कब्जियतको कारण बन्छ ।
अनियमित खानपान पनि यसको कारण हुनसक्छ । जस्तो कि भोक लागेको बेला नखाने, राती अबेर खाने, आवश्यक्ताभन्दा बढी खाने बानीले कब्जियत रोग पैदा गर्छ । त्यस्तै दिसा रोक्ने बानी अर्को कारण हो स्वस्थ्य खानपान र जीवनशैलीले यस्तो समस्या निवारण गर्न सकिन्छ । पायल्सको समस्या छ भने चाहि त्यसको प्रकृति अर्थात श्रेणी अनुसार उपचार विधि अपनाउनु पर्छ । सामन्य स्थितिमा खान पान, जीवन शैली, व्यायाम आदिबाट यसको निदान खोज्न सकिन्छ पायल्स भएको अवस्थामा बोसोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मासुजन्य, दुधजन्य, मैदाबाट बनेका, कार्बोनेटेड ड्रीकं आदिको सेवन गर्नु हुँदैन । मदिरापान, धुमपानले पनि यसलाई जटिल बनाउँन सक्छ।
आज बुधबार पनि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
आज मंगलबार पनि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
आज आइतबार सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ भने, यस्ताे छ आजकाे भाउ
स्ट्रेच मार्क्स अर्थात सेतो धर्साबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ?यस्ता घरेलु उपाय’ अपनाउनुहोस्
साबधान ! रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने यी १० खानेकुरा, भुलेर पनि नखानुहाेस् !